Vokovoko mena Mahajanga: na aiza na aiza, ho an’ny rehetra | Région Boeny
Toy ireo Vokovoko mena rehetra dia nankalaza ny andro maneran-tany ihany koa ny ny teto Mahajanga. Naroso ny asabotsy 07 may 2016 ny fankalazana raha toa ka ny 08 may no daty voatondron’ny Firenena mikambana ho amin’izany.
Fametrahana fehezam-bonikazo manoloana ny tsangambaton’I Atoa Henry Dunant mpanorina ny Vokovoko mena, fizarana kilalao sy vato mamy ho an’ireo zaza mianatra ao amin’ny akanin-jazan’ny Vokovoko mena Mahajanga, ary vary sy kanikanina an-davan’andro ho an’ireo be antitra sahirana. Nisy ankoatra izay ny fiarahan’ireo mpikambana mitotorebika.
Ireo no hetsika notanterahin’ny Vokovoko mena Mahajanga, nanamarihana ny andron’ny 8 mai, izay natrehan’ireo manam-pahefana sivily sy miaramila teto an-toerana.
Manala ny fanaintainan’ny olombelona ary mamerina ny hasina maha-olona, io moa no fototra ijoroan’ny Vokovoko mena. Ka amin’ny alàlan’ny vonjy voina, fitsaboana ary fiadiana amin’ny valan’aretina no anisany imasohan’izy ireo hanatanterahana izany tarigetra izany. Ka dia nisy ihany koa fanehoan’izy ireo ny fomba fiasan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina nandritra io sabotsy io.
Ho an’ny faritra Boeny dia filoham-boninahitry ny Vokovoko mena Rtoa Tsiazonangoly Josiane, vadin’ny Lehiben’ny Faritra, ka tonga nanome voninahitra ny lanonana sy nandray anjara mavitrika tamin’ny fizarana ireo fanomezana.
Nisolo tena ny Lehiben’ny Faritra kosa ny Sefo Kabinetra, Atoa Hemedy ary nitondra hafatra ho an’ireo mpikambna dia ny fisaorana amin’ny fanampiana ny mpiara-belona. Tokony hiparitaka manerana ny faritra ianareo hoy izy, indrindra any amin’ny ilany andrefana mba hahatanteraka ny lohahevitry ny fankalazana tamin’ity taona ity manao hoe, “na aiza na aiza, ho an’ny rehetra”.